Galaxy Watch nọ n'ọrụ, anyị na-enyocha ego dị ọnụ site na Samsung | Gam akporosis
Michael Hernandez | | Noticias, Nyocha, smartwatch
Anya nlele anya ka bu otutu ulo oru dika Samsung, Huawei na Apple, n'agbanyeghi na obu nani otu bu onye ama ama. Ikekwe ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ji aga n'ihu na-akụ nzọ mgbe niile na-ewepụta ụzọ ndị ọhụrụ na ahịa, nke ahụ bụ ihe atụ nke a Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ.
Oge eruola ka ịhazie ọnụahịa ntakịrị maka ngwaahịa nke na-agwụchaghị ịgbasawanye n'ihi nke a, nke ahụ bụ na ha na-efu ihe dịka ekwentị dị n'etiti. Anyị nwere n'aka anyị na nkwojiaka ọhụụ Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ, nọnyere anyị ma anyị na-eme nyocha siri ike.
Dị ka ọ na-adị, nyocha anyị ga-agabiga akụkụ kachasị dị mkpa na ọkwa nke ihe, imewe, njirimara onye ọrụ yana karịa ahụmịhe niile ojiji ya nyere anyị. Maka nke a ị nwere ike ịga ozugbo na ngalaba ọrụ aka gị nke kachasị masị gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ etu ọ si aga ma soro anyị n'ụzọ ka mma, anyị nwere nyocha vidiyo na mmekorita ya na ndị ọrụ Androidsis anyị hapụrụ n'isi nke isiokwu a, yabụ ka anyị gaa ebe ahụ chọpụta Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ, ihe "dị ọnụ ala" ọzọ na Apple Watch. Ọ bụrụ n’ịchọghị iche maka ya ọzọ, ị nwere ike ịzụta ya na njikọ a site na naanị 199 euro.
1 Nzube na ihe: Samsung na-eme ka nche gị dị mfe
2 Usoro eriri na njirimara onye ọrụ: Enweghị bezel na-agbagharị
3 Nka na ụzụ na ngwaike
Nzube na ihe: Samsung na-eme ka nche gị dị mfe
Samsung na-etinye aka na ịga n'ihu site n'inye anyị elekere elekere kpamkpam, dịka ọ dị kemgbe mmalite ya na nke ahụ na-egosi ọdịiche dị na ya site na asọmpi (Apple Watch). Anyị na-ahụ aluminom na bezels, iko 2.5D kwadoro maka n'ihu yana dịka ọ dị na mbụ na Watch Watch, polycarbonate maka azụ ebe anyị ga-ahụ ihe mmetụta sensọ. Nha nke okirikiri bụ Ẹkot nke 1,1 sentimita asatọ nke ihuenyo, ọzọ kpọmkwem28.1 millimeters na gburugburu ya ma anyị ga - enwe naanị bọtịnụ abụọ dị n'akụkụ aka nri,nke ahụ ga - enyere anyị aka ịmekọrịta ihe elekere gafere ihu na - emetụ aka.
Akụkụ:39.5 x 39.5 x 10.5mm
SizeDiameterkpọ oku n'obosara: 28.1 mm
Ibu ibu:25 grams
Na nkenke anyị na-ahụ ụfọdụ akụkụ nke 39.5 x 39.5 x 10.5mmesonyere ngụkọta nke 25 gram, ma ọ bụrụ na enwere ike ịkọwa ihe a na Galaxy Watch na-arụ ọrụ ọ bụ nchapụta ya. Ga-enwe ike inweta ya na Spain na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nwa, pink na ọlaọcha, palette agba nke na-emeghị ihe n'eziokwu adịghị njọ ma ọlị,na anyị ikpe anyị na-anwale green unit nke bụ nnọọ pụtara ìhè, ma ọ bụghị adabara ọha na eze na-achọ ihe ọzọ dị oké njọ, na ikpe m ukwuu ikwu na nwa na ọlaọcha nsụgharị.
Usoro eriri na njirimara onye ọrụ: Enweghị bezel na-agbagharị
Otu n'ime njirimara nke Samsung's Galaxy Watch katalọgụ bụ bezel ahụ na-agbagharị, ihe na-enye gị ohere ịgafe site na njirimara onye ọrụ na-enweghị imetụ ihuenyo ahụ, nke ahụ bụ na panel ahụ, doro anya, na-agwụ ike n'ọtụtụ oge na-echebara ogo ha na otosịrị iru. Anyị na-ahụ ihuenyo 1,1-anụ ọhịa na bọtịnụ abụọ gbara gburugburu n'akụkụ iji gafee TizenOS.
Eriri bụ akụkụ ọzọ na-ekpebi nke ukwuu, anyị na-achọ ịgbanwe ha mgbe mgbe ọ bụghị naanị n'ihi na ha mebiri, kamakwa n'ihi na anyị gbanwere ụdị anyị. Nke a Galaxy Watch nọ n'ọrụ jiri usoro anchoring ọkọlọtọ na eluigwe na ala, ya bụ, ị ga-enwe ike iji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị eriri ọ bụlaa, na ị gaghị arapara naanị ndị Samsung na-enye na katalọgụ ya naanị ihe karịrị 30 euro. Nwere ike ịhọrọ metal, silicone, naịlọn ... ọ ga-adabere na gị na ihe niile na-echekwa dị ka Amazon nwere ike ịnye gị, N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ngwugwu ahụ gụnyere ọkọlọtọ silicone ọkọlọtọ, enwere ọtụtụ ekele maka egwuregwu.
Nka na ụzụ na ngwaike
Samsung kpebiri ịbanye na ala siri ike, ya mere ọ na-enye anyị njikọta Bluetooth 4.2 obere ume(anyị na-atụ uche na-ama-eji version 5.0) na 802.11bgn WiFi na band 2,4 GHz.Na ọkwa nke atụmatụ kwekọrọ, anyị ga-ekwupụta n'ụzọ doro anya na anyị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ya, ebe ọ bụanyị nwere njikọ NFCma ga-esi otú a kwe ka a rụọ ọrụ ọ bụla kwekọrọ. Emere ya maka egwuregwu, ya mere ọ gaghị efu GPS, accelerometer, barometer, gyroscope, onye na-agụ ọnụọgụ obi na ihe mmetụta ọkụ gburugburu.
Na sọọsọ ngwaike larịị anyị ga-enwe 700 MB RAM, tinyere igwe nhazi abuo, na 4 GB nke nchekwa dị n'ime nke ga-adịgide na 1,5 GB ozugbo arụnyere sistemụ arụmọrụ,zuru oke maka ezigbo ọgụ nke ngwa n'ime ụlọ ahịa ahụ Tizen OS,mana ezughi oke ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịchekwa ụdị ọdịnaya ndị ọzọ dịka egwu ma ọ bụ Pọdkastị. Cheta na anyi nwere a SuperAMOLED panel 1,1-inch na-enye mkpebi nke pikselụ 360 x 360na a 230 mAh batrịn'ahịrị ụdị nlele ndị ọzọ. Obere ka a mata na ngwaike ngwaike, ebe anyi agaghi agha ihe obula. Anyị ekwesịghị ichefu na anyị nwere igwe okwuikpo iwu na IP68 asambodo megide mmiri na ájá, na-akwado 5 ATM (ya bụ, ị nwere ike ịmakpu ya ma jiri ya saa ya).
Aghaghị m ikweta na ahụrụ m ya n'anya Nke a Galaxy Watch nọ n'ọrụ nwere usoro ikuku ikuku dị mfe nke nwere ọkọlọtọ Qina ọ-enye gị ohere na-uru nke ọtụtụ atụmatụ nke ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka reversible wireless Nchaji nke ụfọdụ igwe. Nnwere onwe ga-adabere na iji anyị, mana ị ga-ahụrịrị na ọ bụrụ na ị jiri GPS na nyochaa obi, ị gaghị enwe ike mezue ụbọchị abụọ ahụ, yabụ ị ga-akwụ ụgwọ ya kwa abalị.Ahụmịhe anyị n'ịgba ọsọ na ịgba ịnyịnya ígwè emeela ka anyị mata ya nke ọma, ị ga-akwụ ụgwọ ya kwa ụbọchị na nke a nwere ike bụrụ isi ihe na-adịghị mma.
Banyere ahụmịhe nke iji, anyị ahụwo ọgụgụ ziri ezi na ọkwa obi ma ọ na-enye anyị obi eziokwu na ihe niile ọ na-enye anyị, Tizen OS egosila na ọ bụ sistemụ arụmọrụ karịamaka smartwatch na anyị ahụbeghị ihe mgbochi ọ bụla na-eme nchọgharị na ya, ihe a na-enweghị ike ikwu maka Wear OS. Na ọkwa nke imewe na ergonomics elekere fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmeri zuru oke,nke dị mfe bụ mgbe ụfọdụ ihe na-adọta mmasị kachasị, enwere m mmasị na ya karịa Galaxy Watch na ụdị ọkọlọtọ ya.
Ihe kachasị amasị m banyere ya bụ usoro nkwụ ụgwọ, yana eziokwu ahụihuenyo ahụ dị egwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ ọ bụla,na nke a Samsung na-apụ apụ maka ojiji nke ogwe ya. Na mgbakwunye, Tizen OS bụ nke a na-emeziwanye na interface ya na-akpọ gị nke ọma, n'eziokwu, Ọ na-esiri m ike ịbanye na ya dịka Samsung "elekere dị ọnụ ala" n'ihi na ọ kwesịrị ka ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ebee ka ihe nkiri Galaxy Watch nọ na-ada ada n'ụzọ doro anya na obodo kwụụrụ onwe ya,A ghaghị ịgba ụgwọ elekere kwa abalị, ihe ọ bụla ị jiri ya, ebe batrị fọdụrụ, na-eleghara atụmatụ ndị dị ka GPS ma ọ bụ ihe mmetụta ụda obi, agaghị ekwe ka anyị kpuchie ụbọchị ọzọ. Nwere ike nweta ya site na 199,99 na Amazon,Nwere ike nweta ya site na 199,99 na Amazon,elekere elekere nke ọma nyere arụmọrụ ya na ọnụahịa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Galaxy Watch nọ n'ọrụ, anyị na-enyocha elekere nke Samsung nwere ike ịnweta